Raiisal wasaaraha dalka Iswiidhan oo shir muhiim ah la yeeshay hey’adda amniga qaranka | Somaliska
Ra’iisal wasaaraha dalkaan Iswiidhan, Stefan Löfven ayaa maanta kulan aan dabiici aheyn wuxuu la yeeshay aheyn hey’adda u qaabilsan amniga Qaranka, ka dib markii mudooyinkii ugu dambeeyey ay ka dhaceen magaaladda caasimadda ah dilal ay bulshaddu walaac ka muujisay.
Ra’iisal waasaraha ayaa sheegay in aan bulshaddu u baahneeyn ineey ka baqdo tooshadda iyo falalka ay geeysanayaan kooxaha burcada ah lana soo afjaro falalka kooxahaasi geeysanayaan. Ra’iisal wasaaraha ayaa markaa ka dib shir jaraa’id uu qabtay kaga hadlay arrimo dhowr ah oo la xirriira ammaanka guud ee dalka.
“Waa in la kor dhiyaa qarashaadka ku baxaya iyo howlgaladda looga hortagayo kooxaha burcadka hubeysan ah, waana in qofku dareemo nabadgalyo iyo amaan meel kasta oo dalka ka dagan yahay ” ayuu Löven oo tilmaamayey sida ay muhiim u tahay in dowladdu gacan ka geeysato ilaalinta ammaanka bulshadda lana helaa qarash loogaga hortago kooxaha burcadda ah ee baryahaan falaal amaan xummo ah ka geeysanayey magaalooyinka waa weeyn ee dalka.
Kulankan uu ra’iisal wasaare Läven maanta la qaatay laamaha amaanka, ayaa waxaa ku wehliyey wasiirka arrimaha gudaha Iswiidhan Anders Ygeman oo isna dhiniciisa la hadlayey warfidiyeenadda ayaa sheegey in dowladu kodhineeyso hawlaha looga hortagayo danbiyada ka dhaca xaafadaha magaalooyinka waaweyn, islamarkaasina hey’adaha kala duwan ee dalku iska kaashan doonaan sidii gacan adag loogu qaban lahaa dag kooxaha hubeysan ee burcadka ah.
Ugu dambeyntiina kulanka uu maanta laamaha ammaanka Qaranka la qaatay ra’iisal wasaaraha ayaa yimid xilli mudooyiinkii ugu dambeeyey ee dhaceen dilal kala duwan oo ay ku lug leeyihiin kooxo burcad ah oo dhexdooda dirir iyo is raad raadsi ka dhaxeeyo. Dhacdooyinkan ayaa walaac ku abuuray dadka reer Iswiidhan.